3ဥရောပ၌ဃဖိနပ်ဒီဇိုင်းကို software ကို - ဥရောပပေးသွင်းအတွက်တရုတ် 3d ဖိနပ်ဒီဇိုင်းကို software ကို,စက်ရုံ -LARY
နေအိမ် » ထုတ်ကုန်များ » 3: D ဖိနပ်တစ်ဦးတည်းသောဒီဇိုင်းကို software ကို
3ဥရောပ၌ဃဖိနပ်ဒီဇိုင်းကို software ကို
3: D ဖိနပ်ဒီဇိုင်း Software များ
larystudio 3D ဖိနပ်တစ်ဦးတည်းသောဒီဇိုင်းကို software ကို
IGES, အဆင့်, VDA, DWG, DXP နှင့် STL ဖိုင်, စသည်တို့ကို
3ဃဖိနပ် ဒီဇိုင်းဆော့ဖ်ဝဲကို ဥရောပမှာ
Larystudio 3D ဖိနပ်ဒီဇိုင်းဆော့ဖ်ဝဲကိုဥရောပမှ လာ.—လွယ်ကူစွာလည်ပတ်, သည် CAM ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်စစ်မှန်သောအစိုင်အခဲမော်ဒယ်ခြင်း.
3ဖိနပ်တစ်ဦးတည်းသောအဘို့ D ကိုဖိနပ်ဒီဇိုင်းကို software ကို, အထက်ဖိနပ်, ဖိနပ်မှိုနှင့်ဖိနပ်တစ်ဦးတည်းသောမှိုစသည်တို့ကို.
3ဃဖိနပ် ဒီဇိုင်းဆော့ဖ်ဝဲကို ဥရောပမှာ ဖေါ်ပြချက်:
3: D ဖိနပ်ဒီဇိုင်းဆော့ဖ်ဝဲကိုဥရောပမှ လာ.—အများဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ် 3D ဖိနပ်ဒီဇိုင်းကို software ကို.
- တစ်ဦးက software ကိုအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုဒီဇိုင်းနှင့်လည်းသည် CAM ထုတ်လုပ်မှုတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
- Lary 3D ကင်နာများနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောပေါင်းစည်းမှု, 3D ဖိနပ်အပေါ်အခြေခံပြီးအထက်ဖိနပ်ဒီဇိုင်းများအတွက်နောက်ဆုံးမော်ဒယ်ဖိုင်, အတွင်းစိတ်ဖိနပ်, ဖိနပ်တစ်ဦးတည်းသောနဲ့ထပ်တလဲလဲမော်ဒယ်စစ်ဆင်ရေးလျစ်လျူရှုထားတဲ့ဖိနပ်မှို.
Larystudio 3D ဖိနပ်ဒီဇိုင်းဆော့ဖ်ဝဲလက်တွေ့အမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
1. ကွေးမော်ဒယ်နည်းပညာများအတော်ကြာအမျိုးမျိုးနှင့်အတူတစ်ဦးက software ကိုလွယ်ကူအလွန်ရှုပ်ထွေး 3D model ကိုဒီဇိုင်းစေသည်. အဆိုပါဒီဇိုင်နာများအလွယ်တကူဆော့ဖျဝဲခြင်းဖြင့်မိမိတို့၏စိတ်ကူးများအပေါငျးတို့သနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်.
2. အားလုံးဒီဇိုင်းကိုဒေတာကိုတိုက်ရိုက်မှိုဒီဇိုင်းကိုမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်, 3: D ပုံနှိပ်ခြင်း, ထပ်ခါတလဲလဲမော်ဒယ်ရှောင်ရှားရန်သည် CAM ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့သို့မဟုတ် CNC အပြောင်းအလဲနဲ့, နောက်ဆုံးမှာထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်.
3. အဆိုပါထူးခြားသော Solid-မျက်နှာပြင်မျိုးစပ်မော်ဒယ်နည်းပညာအားလုံးအထက်ဖိနပ်စေသည်, ဒီဇိုင်းပုံစံနှင့်တိကျစွာချောဖိနပ်၏နှစ်သိမ့်စေရန်အဆိုပါ 3D ဖိနပ်နောက်ဆုံးမော်ဒယ်တွဲအတွင်းတစ်ဦးတည်းသော.
Ningbo Lary စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များနည်းပညာ Co. ,, Ltd မှပေါ်တူဂီ TECNIROLO Engenharia စက်မှု S.A နဲ့ဖက်စပ်ဖြစ်ပါသည်. Lary တစ်ခုအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါသည် & years.Lary ပေါ်တူဂီ TECNIROLO နှင့်အတူထုတ်ကုန်မြှင့်တင်ရေးနှင့်ဖိနပ်စက်မှုလုပ်ငန်းနည်းပညာဝန်ဆောင်မှုကျူးလွန်ထားပြီးထက်ပိုနှစ်ဆယ်များအတွက်ဥရောပတွင်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများကိုအတူဖောက်သည်ပေး၏အယူအဆအမွေရသောကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း. ယခု, Lary ရဲ့လက်ရှိထုတ်ကုန်များပါဝင်သည်: ရော်ဘာဖိနပ် soleinjection မှိုစက်, မြင့်မားသောတိ & မြန်နှုန်းရော်ဘာဆေးထိုးစက်, 3ဖိနပ်အဘို့အ Dscanner နောက်ဆုံး, 3: D ဖိနပ်ဒီဇိုင်းကို software နှင့် 3D ပရင်တာ.
TecniRolo - ပေါ်တူဂီနှင့် Lary စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ - တရုတ် 16countries ၏ကျော်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ယက်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်ပေးသူအဖြစ်အလုပ်လုပ်သောကုမ္ပဏီအုပ်စုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း.
Ningbo Lary စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များနည်းပညာ Co. ,, Ltd မှ.
ပေါင်း: Jingu အလယ်လမ်း No.9East, Yinzhou ခရိုင်, Ningbo မြို့, Zhejiang တရုတ်
ဖိနပ်အဘို့ရော်ဘာ welt များအတွက် OEM စက်ရုံ